Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya nnukwu Metro obodo, karịsịa site na mba ebe mgbe ị ga-n'anya Hong Kong Tower oghere egwuregwu dabeere na tallest Mmaji n'ụlọ elu niile dị dum China. a 5 ukwu mobile ohere mpere egwuregwu na-edoziri na backdrop nke mara mma anya nke obodo n'okpuru tallest ụlọ elu. The agba bụ niile-acha anụnụ anụnụ na egwu abalị ìhè na complements isiokwu. Ụda nke ifufe ịfụ na ije nke ọrụ n'aka okporo ụzọ n'okpuru na Ugboro ụda nke uwe ojii sirens-eme ka ị na-eche na ị na-guzo n'elu ndị ụlọ nche. The egwuregwu na-egwuri na nzọ ego nke £ 0,20 na a kacha kwa atụ ogho nke na-aga ruo £ 100.
Banyere Mmepụta nke Hong Kong Tower:
The Mmepụta nke a mobile ohere mpere egwuregwu bụ elk Ịgba Cha Cha, ọhụrụ ndú na cha cha ụlọ ọrụ onye na-emepụta ọtụtụ ihe egwuregwu n'ihi na online ọrụ. All ha egwuregwu na-ewu ewu na-egwuri na ọtụtụ cha cha saịtị na mobile ngwa ọdịnala site na ọrụ gburugburu ụwa.
The egwuregwu nnọchianya nke a mobile ohere mpere gụnyere a gold 7, a-acha anụnụ anụnụ diamond, a Lotus ifuru na a bonsai osisi na-etolite n'elu uru isi akara nke oghere. Number 7 na gold a kasị elu na-akwụ ụgwọ na 1500 ugboro n'osisi na 5 akara landings on a payline. E nwere ise random yi Chinese akara na na-ala uru ndị. The egwuregwu logo na-acha anụnụ anụnụ & red Yin-yangs-anọchi anya ndị bonus nnọchianya nke egwuregwu.
Mystery Njirimara Symbol: Mgbe atọ nke egwuregwu logo akara-egosi na a stacked guzobere ikpuchi ukwu, ya ebute ikpughe ọzọ akara. Ọ nwere ike na-ekpughe n'ime-acha anụnụ anụnụ Yin-Yang na mgbe na-eme, ị ga-esi na-egwu bonus larịị tinyere 2 mmezi ndụ jackpot emeri ohere.
Ego Game Entry: The red Yin-Yang bụ ikposa na akara ma atọ ma ọ bụ karịa nke ha ọdịda akpali bonus game. Anọ landings enye gị bonus game ntinye na ihe mmezi ndụ na ise landings na 2 mmezi ndụ na-egwu jackpot agba.
Wheels nke elu-igwe: Nke a bụ jackpot egwuregwu nke a mobile ohere mpere egwuregwu ebe ị ga-esi akpa ogho a ibu wheel na nọmba nke stakes kwuru na ya. E nwere ihe atọ na-etoju na ebe a; mbụ larịị na-enye gị a max mmeri nke 2000 ugboro n'osisi sochiri 10,000 ugboro n'osisi nke abụọ larịị na nke atọ na nke ikpeazụ larịị awade a ohere iji merie a whopping 50,000 ugboro gị eto.
a mobile ohere mpere game awade ọnụ ọgụgụ kasị elu nke na-emeri stakes na ọtụtụ bonus atụmatụ ị pụrụ irite uru site. I nwere ike maa na-atụ anya irite ụfọdụ nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị na-egwu ole na ole spins na a oghere.
Ụlọ ihe nkiri nke Night